musha FOOTBALL MANAGER Maurizio Sarri Utano Nhau Plus Untold Biography Facts
Yakapedzisira Kugadziriswa pane January 30, 2019
LB inopa Nyaya Yese yeMutungamiri weBhola uyo anozivikanwa zvikuru nezita rezita rokuti "Hama 33". Our Maurizio Sarri Childhood Story pamwe nes Untold Biography Facts inounza kwauri nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvika panguva ino. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazivikanwa, mamiriro emhuri, hukama hwehukama, uye mamwe akawanda OFF-Pitch chokwadi (hachizivikanwa) pamusoro pake.
Hongu, munhu wose anoziva nezvehupenyu hwake paNapoli. Kunyange zvakadaro, maoko chete mavheti mavhisi anofunga nezveMuririoo Sarri's Bio iyo inofadza chaizvo. Iye zvino pasina kunze kwekuita, ngatitangei.
Maurizio Sarri Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts -Upenyu Hwekutanga
Maurizio Sarri akaberekerwa musi we 10th waJanuary 1959 kuvabereki vake, Mr na Mai Amerigo Sarri mudunhu reBagnoli reNaples Italy.
Maurizio Sarris anobva kumhuri yepakati-kati yemhuri yakatungamirirwa nababa vake avo vaimbova vashandi vekuvaka kwaItalsider, kambani yeItaly yesimbi. Akakurira mumuganhu weFinnline Valdarno uri muPurovhinzi yeFlorence, Italy.
Semwana, Sarri aifarira mune zvose dzidzo uye kutamba bhora. Kune mhuri yake, dzidzo yakauya pakutanga. Sarri akadzidza zvakaoma uye pakupedzisira akazova mubhengi ane mukurumbira Banca Monte dei Paschi di Siena (inoratidzwa pasi apa) muTuscany, Italy.
Paakanga ari mubhengi, akazviona achiri kuita zvakawanda pakati pebasa rake rebhangi uye achitamba mutambo webasa. Zvinoshamisa ndezvokuti basa raSarri rakabhadhara kunze kweItaly kwaakashanda pamapazi ebhangi rake muLondon, Zurich uye Luxemburg.
Pasinei nokuzvipira kwake kumutambo, kushushikana kwaMaurizio Sarri kutamba bhora rekumhanya kwakanga kusiri kungofungidzira. Kare kumashure, Sarri aizoshanda mubhangi mangwanani ezvo uye aizodzidzisa rimwe boka reamateur masikati nemanheru.
Maurizio Sarri Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts -Kusiya Banking
Muna 1999, pazera remakore 40, Maurizio Sarri akasarudza kurega basa rake rebhangi kuti atsaurire hupenyu hwake hwose hwekushanda kubhokisi coaching. Iko kwaiva zvechokwadi chikamu chekuparadzanisa kwakarongedzwa nevashandi vake vebhangi seanoona mumufananidzo uri pasi apa.
Afer retirement kubva mubasa rake rebhangi, Sarri akacherechedza kuti akange akwegura kuti arege kutamba bhora. Zvinosuruvarisa kuti akange asina kurasikirwa nekutamba basa rake. Sarri akadzokera kuItaly kunodzidzisa kambani yebhokisi reAlso Sansovino Football club iri kuM Monte San Savino, Italy. Pakati pegore 1990 kusvika ku1999, Maurizio Sarri asati asimuka kubva kubhangi, akanga agadzirisa mauto e6 anoti; Stia, Faellese Cavriglia, Antella, Cavriglia uye Tegoleto.
Maurizio Sarri Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts - Simuka Mukurumbira
Pazera rakakura re40, Maurizio Sarri akanga awana ruzivo rwemutambo wekutamba. Akanga achionekwa nemakwikwi akawanda aakakwanisa kuita semutungamiriri uyo asingabvunzi mibvunzo uye haakwanisi kumira kubatanidzwa mukuendesa kukurukurirana. Mr 33 yakagara iri Zita rezita raSarri nekuda kwenhamba ye-set-piece routines nguva dzose aibvunza vatambi kuti vaite. Pakati pe2000 kusvika ku2015, Maurizio Sarri akapedzisa kusimudza mauto e10 asati atumidzwa naNapoli kwaakazozvigadzirira zita.
Roman Abramovich akamubhadharira nokuti aida chokwadi Maurizio Sarri haasi kufarira kuendesa nharo kusiyana nemadzitateguru ake avo vaisazobvumirana naye pamusana pekuita zvisarudzo. Nokudaro, Sarri anova Chelsea's 13th boss Abramovich's huyo hwakatanga muna June 2003. Vamwe vose, sezvavanotaura, ikozvino nhoroondo.
Maurizio Sarri Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts -Upenyu hweMhuri
Asati atora chigaro chakakurumbira cheStamford Bridge, Sarri akararama hupenyu hunotyisa uye hunyararire muItaly Riviera nemudzimai wake anonakidza Marina mwanakomana wavo uye imbwa. Mudzimai wake, Marina (inofanirwa pasi apa) inonyanya kufadzwa nekufambisa iye akapoteredza nyika yeItaly.
Pasinei nekushandiswa kutora motokari refu ichifamba-famba kumaruwa, Sarri haazomboregi kufunga pamusoro pemutambo.
Italian Riviera, nzvimbo Sarri, mudzimai wake nemwanakomana vakange vagara muItaly ibundu rakafanana nemvura yeMediterranean iri kumhenderekedzo yekumaodzanyemba kweFrance neTuscany.
Panzvimbo iyi isina nzvimbo yeNapple nzvimbo, Upenyu hwehupenyu hweMuririzio Sarri zvechokwadi hwakanyarara uye hunobva kumakamera nemudzimai wake nemwanakomana. Asati aita Chelsea yake, mhuri yaMaurizio Sarri inomuona somumwe munhu ari kurwisana nefora sebasa. Sezvo Sarri pachake anozvitaura;
"Pandinoenda kunotungamirira chirongwa chekudzidzisa, handimboti kumhuri yangu: 'Ndiri kuzoshanda,'"
akaudza pepanhau Avvenire.
"Ini ndinobva kumhuri yevashandi, uye kana ndikanzwa mumwe munhu achitaura nezve 'zvibayiro' mubhoza, ndinopenga."
"Ndinoda kuva nerunyararire pamberi pemutambo mumwe nomumwe, saka ndakanga ndisina kugumburwa. Ndinotsaurira kukunda kwese kumudzimai wangu nemwanakomana "
Maurizio Sarri Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts -Smoking Facts
Maurizio Sarri akatsanangurwa nemavhidhiyo eInternet se chain-smoking maverick avo vanonzi vanosvuta kusvika 60 sigareti pazuva nechinangwa chokuderedza kushungurudzika kwake.
Iye zvino mubvunzo mavheti vakawanda vanozobvunza ndeye; Hsezvo Maurizio Sarri akambosvuta panguva yemitambo?. Mhinduro ndeye "Ehe!". Nokusvuta kushandura munzvimbo panzvimbo yemitambo, Sarri achiri kusvuta, panguva ino achishandisa a cigarette filter sezvinoonekwa pasi apa mumitambo
Muchi2018, Napoli's UEFA Europa League vadzivisi, RB Leipzig, vakagadzira chikamu chekuputa chakanyanya munzvimbo yekodhi-nzvimbo yebato ravo raSarri uyo anoonekwa seine cigarete inonyara panguva yemitambo.
unoomesa Mertens pane imwe nguva yaifungidzira kushandiswa kwaSarri zuva rega rega pamatafura mashanu pamusoro apa pazuva. Kunze kwekusvuta fodya, Sarri anofarirawo coffee. At Naples, aizoda kuti muchengeti wechikwata aende naye awane fresh espresso panguva yekudzidzira uye kutarisana masikati.
Maurizio Sarri Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts -Foul-Mouthed
Sarri anovenga cameramen nevanyori venhau vanobvunza mibvunzo yepenzi kana kumira pamusoro pake kuti vabvunzurudze pasina kubvumirwa kwake. Zvakanaka, iye haazivi nzira yekuve nemibvumirano pamusoro pemashoko ake. Pasinei naizvozvo, anogara achiregererwa nemutori wenhau uye vateveri. Sarri akambova nemhinduro yakashata kune mutori wenhau anoenda nemashoko;
Iwe uri mukadzi, iwe unofadza, saka handingakuudze iwe f *** kunze! '
Uyu ndiye Maurizio Sarri achipindura nenzira isiri yezvematongerwo enyika mushure mokunge atarisana nemutapi wenhaukadzi. Muchida chokupukunyuka kugadziriswa, Maurizio Sarri akabva akangokumbira ruregerero mushure mokutaura kwake kusina kunaka. Hurukuro yakashata yakauya nokuti yakatsamwiswa neNapoli ya0-0 yakatora neCan at San Siro. Izvi zvakaita kuti timu yake iende kutanga-tanga kugadzira Juventus ichidzika pamusoro pavo nechokuita.
Pamberi pemhinduro yake yakaipa, Mutevedzeri wechikadzi akamubvunza mubvunzo uyu;
"Ndakakubvunza iwe pamusoro pekufunga kwako kuti iwe wakagutsikana nemugumisiro, ini hainzwisisi kugutsikana kwekuenda patafura. Ndapota tsanangura "
Maurizio Sarri Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts -The Conte Replacer
Waiziva ??, haisi yekutanga verenga yakadzingwa uye yakatsiviwa naMaurizio Sarri sezvaunogona kuziva kubva kuCentral FC. Asi sevatongi vakawanda kwazvo pamberi pake, verenga akanga asingakwanisi kuchengetedza ukama hwakanaka hwekushanda neBlocker's board. Zvakanaka, iye ainzi akamanikidzwa kushanda nevatambi asi haana kukumbira.
Pashure payo verenga yakanga yakabatanidzwa mune Calciopoli match-fixing scandal mu 2006 (izvo zvakaona Juventus zvakaderedzwa), basa rekuchengeta basa rake rekutanga rekudzidzisa kuArezzo raive muchechi yechipiri rweItaly rakanga risingazovi nyore neine nhanho yechitanhatu muruoko. Nemafaro, mutungamiriri wenhabvu Piero Mancini akatanga kutsvaga kwake mutariri ane ruzivo. Antonio Conte akadzingwa uye Sarri akaunzwa kuti atore nzvimbo yake. Tarisiro nekupona kwechikwata kwaive ikozvino pazita raSarri. Zvinosuruvarisa, zvakanga zvanyanyisa sezvo Arezzo yakanga isina kungobviswa chete asi yakaramba ichingobhadhara uye yakanga isati yadzoka.
Maurizio Sarri Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts -The Old Fashioned
Maurizio Sarri anoonekwa semutungamiri akare-kare uye technician uyo ane zvidzidzo sechikamu chezvikamu zvake zvekudzidzisa. Misoro yake huru yemanheru inosanganisira; "Mabhora akachengetedza, kona uye zvirongwa zvisingabhadhari"
Pasi pane mufananidzo waMaurizio Sarri akarovera vatambi vake mumakore ake ekutanga semutungamiriri webhola.
CHOKWADI KUTI: Tinokutendai nokuverenga Maurizio Sarri's Childhood Story pamwe neustold biography zvayo. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe kana kuti taura nesu!